Maniky, Pediky | Fampahalalana mahasoa ho an'ny rehetra.
Misy fahasamihafana goavana eo amin'ny CND Shellac sy OPI Gel Color?
Misy fahasamihafana lehibe ve eo amin'ny CND Shellac sy ny OPI Gel Color? Manatevin-daharana ny valiny teo aloha aho. Formula pro varnish gel tena tsara dia efa lany andro ny varnish gel CND. Ankehitriny ...
Lazao ahy ny fomba hisarihana ny mpanjifa amin'ny tompony mpandidy iray amin'ny manikika? Ho velom-pankasitrahana anao aho ho ohatra avy amin'ny fiainana.
Lazao amiko ny fomba hisarihana ny mpanjifa amin'ny manicurist vaoavao? Faly aho fa misy ohatra amin'ny fiainana. Ohatra ahy manokana. Aorian'ny fampianarana voalohany, mampitaha ny zavatra ataoko amin'izay hitanao ...
Inona no teboka na mpanampy amin'ny mpikarakara
inona ny teboka na teboka ho an'ny maniyur dia teboka - fitaovana ho an'ny famolavolana fantsika. miaraka amin'ny fanampiany, ny teboka misy savaivony samy hafa dia voasarika, ny tsirairay avy amin'ireo teboka manaraka dia mamorona teboka kely kokoa raha ampitahaina ...
Ahoana ny fanesorana ny fantsika lava?
ahoana no manala ny hoho mitatra? ao amin'ny salon Tsy misy dikany ny maka azy dia manapaka azy, na mandeha any amin'ny salon, dia hokapahin'izy ireo ho anao Raiso ny kapoaka na hety ary hokapohina ny fantsika sandoka amin'ny ...
Firy ny ankizivavy mafana amin'ny jiro polisy gel ????
Ankizivavy ohatrinona no ho maina amin'ny poleta fanaovana jiro ???? manomboka amin'ny 3 ka hatramin'ny 10 minitra, arakaraka ny verinia sy ny isany eo amin'ny hoho 2 minitra ao amin'ny jiro UV sy 30 segondra ...
Nahoana ny zana-kisoa no mahatsinjo mahatsiravina rehefa manadio, na dia manasa ny tongotro isan'andro aza aho?
Fa maninona no manimbolo ny rantsan-tongotro rehefa manapaka, na dia manasa tongotra aza aho isan'andro? Ary tsikaritr'izy ireo ny toerana niavian'izy ireo. Tsy ny fantsika no maimbo, fa izay miangona eo ambanin'ny ...
Fanamafisana amin'ny biogel na acrylic?
Fanamafisana amin'ny biogel na acrylic? Tiako ny manatanjaka bebe kokoa amin'ny biogel - malefaka izy ary miondrika amin'ny fiantraikany, fa tsy mitetika. Raha manana olana amin'ny bio ny tompony voalohany dia mendrika azy ...
Iza no mahalala izay dikan'ny mainty hoditra?
iza no mahalala hoe inona no mahatonga ny teboka mainty amin'ny hoho? Amin'ny hohonao? sa eo ambanin'ny fantsika? raha eo ambaniny dia midika izany fa tsy ampy ny vitamina, indrindra ny calcium, malemy ny hoho ...
Ahoana ny fampitomboana ny takelaka fantsika?
ahoana ny fanitarana ny takelaka fantsika? aza tapahina ho aotra, toy ny micronychia io. Ny sisiny malalaka dia tokony hijanona foana, ary aleo lava kokoa noho ny amin'ny sary Wow, inona ary raha tsy misy antsika ...
Te-hanao manikika any an-trano aho. aiza no hanombohana, aiza no mahazo mpanjifa?
Te hanao manicure ao an-trano aho. aiza no hanombohana, aiza no ahazoana mpanjifa? Tena marina i Koshka Umnaja Fa tsy te hanao manicure aho, nataoko indroa, nanidina tampoka =) tsy nampoizina! FROM ...
Shellac na gel poloney
Ny poleta vita amin'ny shellac na shellac dia tena poloney. Samy hafa amin'ny fomba fampiharana (miresaka momba ny fametrahana mialoha), ny faharetana, ny loko ary ny fanesorana (esorina mora foana ny shellac, saingy ...
Ahoana ny ao an-tokantrano hahatonga ny hoditra ho malefaka sy mampitombo
Ahoana ny fanaovana ny hoditry ny tananao ho malefaka sy malefaka ao an-trano Tsy sarotra ny mikarakara ny hoditry ny tananao ao an-trano raha manaraka ny tolo-kevitra sasany ianao. Torohevitra vitsivitsy momba ny fikarakarana tanana ...
iza no anaran'ny poleta fantsika manokana ho an'ireo manaikitra ny hohony ... Tsy afaka mitsaha-nono zaza aho
iza no anaran'ny poleta fantsika manokana ho an'ireo manaikitra ny hohony ... Tsy afaka misara-nono zaza amin'ny Princess Nekusayka (kosmetika ho an'ny ankizy) misy varnisy toy izany ao amin'ny andiany "Lady Rose", saingy mbola mibontsina be ...
Afaka mahazo VIH ve aho amin'ny fanaovana asa tanana?
Afaka mahazo VIH ve ianao rehefa mahazo manicure? virus virus aids dia viriosy tsy milamina ... Avy eo, raha te ho tratry ny VIH ianao dia mila sela maromaro amin'ity virus ity fa tsy hoe ao anatin'io isa io ...
Ny fantsika dia tena simba, miparitaka. Inona no tokony hatao?
Vaky tokoa ny hoho, manafoana. Ny hatao? manosotra ny hoho isan'andro amin'ny alikaola calendula (amidy amin'ny farmasia). Ny hoho dia hitombo lava sy matanjaka. Ny amandy dia tsara atao hoho. Recommended ...
Manimba ve ny jiro ultraviolet?
Mampidi-doza ve ny jiro UV? Valiny mahatsikaiky! Indrindra momba ny hopitaly, izay misy otrikaretina ultraviolet amin'ny efi-trano - amin'ny ankapobeny dia may! ! Azo antoka ny jiro fantsika UV. Ny spectrum taratra ao amin'izy ireo dia tsy mitovy amin'ny ...
manampy amin'ny fitadiavana tononkalo ho an'ny fitsingerenan'ny andro nahaterahan'ny mpampianatra
ampio hahita tononkalo fitsingerenan'ny andro nahaterahan'ny mpampianatra momba ny manicure momba ny manicure! Miarahaba ny mpampianatra kilasy! Mirary soa ho anao izahay, mba ho voavaha ny olana rehetra! Mba hahafantaran'ny rehetra anao, aza manafintohina, mitia am-pahatsorana, avo ...
Na tsidiho azafady raha ilaina ny manasitrana rongony amin'ny jiro ary inona no fotoana anaovana ny biogel amin'ny fantsika?
Azonao atao ve azafady mba lazao amiko raha mila maina ao anaty jiro ny primer ary mandra-pahoviana no apetraka amin'ny biogel amin'ny hoho? 1) Tsy ilaina ny manamaina ny primer, 2) matetika ny biogels dia tsy mila fampiharana mialoha ny primer ...
Ahoana ny fomba hanesorana ny fihomehezana amin'ny rantsantanana?
Ahoana ny fanalana ny burrs amin'ny rantsan-tananao? ... Afanaina ao anaty lovia kely ny menaka oliva ary atsobohy ao ny tananao. Tazomy mandra-mangatsiaka ny menaka. Avelao hidina ny menaka, asio fonon-tànana vita amin'ny landihazo ary ...
Primer or Bonder? Moa mila an-tsitrapo ve ny ankizivavy ary manambany ny hoho? Moa ve ireo singa 2 ireo? raha
Primer sa Bonder? Moa ve ny zazavavy mila mampiasa primer fantsika gel sy bonder? Ilaina ve ireo singa 2 ireo? Raha ny Primer - dia any Afrika - ny primer dia asidra izay ...
55 fangatahana ao amin'ny angon-drakitra novokarina tamin'ny segondra 0,620.